Manchester City iyo Juventus oo ku loolamaya Raul Jimenez | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Manchester City iyo Juventus oo ku loolamaya Raul Jimenez
Kooxda heysata horyaalka Premier League Manchester City iyo Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseynayaan saxiixa Raul Jimenez .
Xiddiga reer Mexico ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horreeyay ee horyaal muddo sannad ku dhow guushii ay ka gaareen Southampton isbuucii hore.
Jimenez wuxuu isu muujiyey inuu yahay gooldhaliyaha la xaqiijiyay Premier League tan iyo markii uu yimid Molineux sanadkii 2019 waxaana sida laga soo xigtay Tuttomercatoweb , City iyo Juve ay ku dagaallami doonaan adeegyada 30 jirka.
Ka dib isku daygoodii fashilmay ee ay Harry Kane kaga soo qaadan lahaayeen Tottenham Hotspur Man City ayaa weli ku jirta suuqa kala iibsiga waxayna u aqoonsatay Jimenez inuu yahay musharrax muddo gaaban ah si uu u buuxiyo booska bannaan.
Dhanka Juventus, waxay raadinayaan inay xoojiyaan xulashooyinkooda dhanka weerarka iyo inay tartan dheeri ah siiyaan weeraryahanka da’da yar Moise Kean , kaasoo la saxiixay xagaagan kadib bixitaankii Cristiano Ronaldo ee Manchester United.
Jimenez, oo seddex sano uga harsan tahay qandaraaskiisa, ayaa 116 kulan u saftay tartamada oo dhan Wolves, isagoo dhaliyay 49 gool isla markaana caawiyay 18 kale.
Previous articleShirka Jaraa’id ee Pep Guardiola, Ilkay Gundogan, iyo Oleksandr Zinchenko oo ka maqan kulanka Man City ee Liverpool
Next articlePep Guardiola: ‘Jurgen Klopp ayaa iga caawiyay inaan noqdo tababare fiican’
Xog: Xaguu ku dambeeyey shirkii uu Farmaajo iclaamiyey ee lagu soo...